Narendra | Narendra Raule - Part 5
विद्यार्थीहरूका लागि उपयोगी एप्स
नरेन्द्र रौले स्मार्टफोनको बजार बढ्दो छ । इन्टरनेटको सुविधा पनि पहिले भन्दा सहज बन्दैछ । विद्यार्थीहरू पनि प्रविधिको दुनियाँमा रमाउँदैछन् । कुनकुन एप्स अध्ययन र आफ्नो जीवनमा उपयोगी छन् ? चर्चा गरौं । मेरोएन्सर :…
नरेन्द्र रौले एउटा मानिसले आफ्नो जीवनकालमा कति पटक रक्तदान गर्ला ? काभ्रे सिपालीमा जन्मिएका अर्जुन मैनालीले यसपालि अस्ट्रेलिया पुगेर १ सय ३७ औं पटक रक्तदान गरे । रक्तदान गर्नकै लागि विश्वका आधा दर्जन मुलुकमा…
Blogging May 24, 2015
 प्रमोद न्यौपाने, इन्जिनियर यो भुइँचालोले नेपाललाई धेरै पाठ सिकायो । घर बनाउँदा सर्वसाधारणदेखि सबैले ख्याल गर्नैपर्ने धेरै कुरा छन् । यो महाविपत्तिपछि हाम्रो मुलुकमा सडक संरचना, विद्युत्, टेलिफोन, एयरपोर्ट, इन्टरनेट सेवा सुचारु भएकाले…
नरेन्द्र रौले सहयोगको दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ नेपालमा आइपरेको महाविपत्तिको घडीमा हामी परदेशमा बस्नेहरूले आ–आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्नैपर्छ । थोरै, धेरै जति सकिन्छ आर्थिक सहयोग गर्नु हाम्रो पहिलो कर्तव्य हो । त्यसबाहेक हामी जहाँ रहे पनि…
Blogging May 22, 2015
राहत कुरिरहेका गाउ
नरेन्द्र रौले रसुवा जिल्लाका विकट गाउहरु मध्येमा पर्छन्, यार्सा, सराङखोली, डाँडागाउ, गोल्दुङ, र हाकु । बैशाख १२ गतेको महाभुकम्पले यि गाउका ९५ प्रतिशत घरहरु ध्वस्त भएको बताउछन्, धैबुङ, कटुञ्जे, रसुवाका रमेशकुमार । ‘अझै बढी घरहरु…
नेपालको पुननिर्माणमा विदेशमा बस्नेहरूले कसरी, के कस्तो सहयोग पुर्‍याउन सक्छन् ?
नरेन्द्र रौले नेपाल बाहिर ठूलो ठूलो संख्यामा नेपालीहरु बसोबास गर्छन् । हरेक नेपालीहरुमा कुनै न कुनै प्रकारको सीप, क्षमता छ । आर्थिक हिसाबले पनि कोही कम छैनन् । एक थुकि सुकी, सय थुकि नदी भने…
धरहराको टुप्पाबाट चिच्याएको सुनें
बैशाख १२ गते भूकम्प आएकै दिन म धरहरातिर दौडेको थिएँ । शहिदगेटबाट सुन्धाराको आकाशे पुलनेर पुग्दा भीड ठूलै थियो । प्रहरी र केही स्वयंसेवकहरुले हातको साङ्लो बाँधेका थिए । धरहरा जान खोज्नेहरुलाई फर्काउदै थिए ।…
मरिसाको नेपाली मन
नरेन्द्र रौले अमेरिकाको न्युजर्सीमा जन्मिएकी मरिसा पोल्नेरोले अमेरिकाका १५ राज्य घुमिसकेकी छिन्, तर नेपाल आएर भने उनले त्योभन्दा बढी जिल्ला चहारिन् । ‘म त संसारकै सबैभन्दा भाग्यमानी हुँ ।’ हालैको भेटमा हँसिलो मुहारसहित नेपाली लबजमा…